CHID Bank Strives to Satisfy Housing Demand | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalCHID Bank Strives to Satisfy Housing Demand
FeaturedBusinessLocalProperty & Real Estate
CHID Bank Strives to Satisfy Housing Demand
U Win Zaw, Chief Policy Officer of CHID Bank
Written by Ei Thandar and Tin Maung Oo
Food, clothing, and shelter are the basic necessities that humans need access to. Helping people meet their need for shelter is one of the mandates of the Construction, Housing, and Infrastructure Development Bank (CHID). We recently sat down with the bank’s chief policy officer, U Win Zaw, to discuss how CHID is addressing the housing needs of Myanmar people.
When asked about the establishment of the bank, he said, “We started this bank in January 2014. The government, through the Ministry of Construction, has been developing housing for people for around three decades but was unable to meet the [rising] housing demand. It commenced the Ministry of Construction to explore ways to satisfy the demand and enable people to ownahome. They came up with the answer that the country needs to createabank to facilitate loans granting to people like in Singapore, Japan or Korea. The bank was born with the government holdinga40 percent share.”
The remaining 60 percent of CHID’s capital was provided by businessmen from various sectors, most of the construction experts.
In addition to developing housing, the CHID Bank is working on infrastructure development projects including roads, schools, clinics, and parks.
The first project CHID got involved in asaloan provider wasahousing development in Shwe Lin Ban Industrial Zone, developed by the Department of Urban and Housing Development under the Ministry of Construction.
When it was announced that people could apply to buy affordable apartments on an installment plan, thousands of people bought application forms but only 700-800 showed up to submit an application. On examining the applications, the bank found that only 300 people were able to put up the required 30 percent down payment. Ultimately, only 200 people were able to make the down payment and pay the remainder undera10-year installment plan. It’s safe to say CHID’s first foray into housing sale was notahuge success.
In 2016, the bank launchedanew product that enables customers who maintain house savings accounts with CHID to buy apartments once their savings reach 30 percent of the down payment. Currently, over 60,000 people have opened house saving accounts with CHID, with about half now eligible to buy an apartment.
The bank has sold apartments to 5,400 people under its home loan program, for which it has set aside approximately K50 billion.
“If we have more apartments to sell, we will definitely sell more. We are also looking into providing home loans to buyers of private housing developments in addition to other development projects by the Ministry of Construction,” added U Win Zaw.
The bank pays an 8.25 to 10 percent savings interest rate and charges the savings rate plus three percent for loans. It is granting home loans at 8.5 percent using JICA loans witha5.5 percent interest rate. The bank charges an 8.5 percent interest rate for housing developed by the Ministry of Construction and 13 percent for housing developed by private developers.
နေ့စဥ်လူနေမူ ဘဝများမှာတော့ မဖြစ်မနေ ဖြတ်ကျော်ရမယ့် အရေးပါတဲ့ အချက်များက စားသောက်ရေး ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်ရေးနဲ့ နေထိုင်ရေး တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ အကြောင်းရာများအတွင်းမှ နေထိုင်ရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေတဲ့ အခက်ခဲများအတွက် တတ်စွမ်းသမျှ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ CHID ဘဏ်က Chief Policy Officer ဖြစ်သူ ဦးဝင်းဇော်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ယခုလို ဆောက်လုပ်ရေး အိမ်ရာ အခြေခံအဆောက်အုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် CHID ဘဏ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မေးမန်းခဲ့ရာမှာတော့
“၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလမှာ တော့ ဒီဘဏ်ကြီးကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူလူထုတွေအတွက် အိမ်ရာတွေကို ဆောက်ပေးရတယ်။ အစိုးရက အိမ်ရာတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာ ငွေကြေးကဏ္ဍကို အပြည့်အဝလည်း မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး နှစ်ပေါင်း ၂၅ ၊ ၃၀ လောက် ဒီအိမ်တွေကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း ပြည့်ပြည့်ဝဝတည်ဆောက်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ။ ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ပိုင်လေးနဲ့ နေထိုင်နိင်မယ့် အနေထားလေး တစ်ခုရောက်လာအောင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာကို တာဝန်ပေးပြီးလေ့လာခိုင်းခဲ့တယ်။ အနေထားအရ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေစင်္ကာပူနိုင်ငံ ဂျပန်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူလူထုတွေအတွက် အိမ်ရာငွေချေးစနစ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုငွေပေးချေနေလဲဆိုတာ အိမ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အိမ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဆောက်နိုင်တဲ့ အနေထား မရှိကြဘူး အဲတော့ သူတို့ကို ချေးငွေပေးပြီးတော့မှ အိမ်ရာဝယ်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခုရတဲ့ အခါမှာ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပါတ်သက်ရင်တော့ ဘဏ်တစ်ခု ကြားခံဆောင်ရွက်မှပဲ အဆင်ပြေမယ် ဆိုတဲ့ အဖြေရတဲ့ အခါမှာတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဒီမှာ အစုရှယ်ယာ ၄၀ ရာခိုင်နူန်းပါဝင်ပြီး စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”လို့ ဦးဝင်းဇော် ကပြောပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ CHID ဘဏ် အ နေဖြင့်
ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် ပါတ်သက်သော အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း အပြင် အိမ်ရာများတွင် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အုံ လုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ခြင်း ပြည်သူလူထုများ ဆက်သွယ်သွားလာနေသော လမ်းများ ဖေါက်လုပ်ခြင်းများ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမူနှင့် ပါတ်သက်ကာ လိုအပ်နေသည့် ကျောင်းများ ၊ ဆေးခန်းများ ၊ ပန်းခြံများ အစရှိတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ယခု ဘဏ်ကြီးကို ဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ CHID ဘဏ်ကိုတည်ထောင်သည့် ကျန်ရှိသော ၆၀ ရာခိုင်နူန်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဘဏ်ကြီးကို စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် အခါမှာတော့ ပါဝင်သည့်သူများက ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အားလုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စတင်သည့်အခါမှာတော့ Pilot Project အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနဲ့ အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန က တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရွှေလင်ဗန်းမှာ ရှိတဲ့ အိမ်ရာကို စပြီး ချေးငွေပေးမယ်ဆိုကာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုလိုစတင်ရာမှာတော့ ပြည်သူလူထုအတွင်းက မည်သူမဆို လျောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီး လျောက်ခိုင်းခဲ့ရာမှာ လျောက်လွာပေါင်း ထောင်နဲ့ ချီကာ ဝယ်ယူသွားပါတယ်။အမှန်တစ်ကယ် ပြန်လည်တင်လာတာကတော့ ၇၀၀ / ၈၀၀ ခန့်ပဲ ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နေက်မှာတော့ ပြန်လည်စိစစ်လိုက်သည့် အခါတော့ အိမ်တွေကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် အိမ်ရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နူန်းကို လက်ငင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး ၇၀ ရာခိုင်နူန်းကို ချေးပေးမယ် ၁၀ နှစ်နဲ့ ချေးပေးမယ်လို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၃၀ ရာခိုင်နူန်းကို ပေးမယ့်သူများ ကပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ လူ ၃၀၀ ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ကယ်ပေးနိုင်တဲ့သူက ၂၀၀ သာ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့ အိမ်ရာဝယ်လိုခြင်များ ရှိပေမယ့် ၃၀ ရာခိုင်နူန်းသွင်းရန်မှာတော့ အခက်ခဲများ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၅ မှာ အောင်မြင်မူသိပ်မရရှိလိုက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး အိမ်ရာအခြေခံအဆောက်အုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှာ Housing Saving အကောင့် ဖွင့်ထားသည့် အိမ်ရဲ့ တန်ဖိုး ၃၀ ရာခိုင်နူန်းပြည့်သော သူများကို ပြည့်သည့် နေအလိုက် စီနီယာအတိုင်းစီကာ အိမ်ရောင်းချပေးမည်ဆိုသည့် စနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုမှာ အကောင်အထည်ဖေါ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ Housing Saving အ ကောင့် ဖွင့်ထားသူပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ CHID ဘဏ်မှ ရောင်းချပေးထားသူဦးရေပေါင်း ၅၄၀၀ ရှိပါတယ်။ အဆိုပါချေးပေးထာသည့် ပမာဏကတော့ ၅၀ ဘီလီယံခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။Housing Saving ရှိသည့် ခြောက်သောင်းကျော်တွင် အမှန်တစ်ကယ်ဝယ်ယူခွင့်ရှိသည်က ၃၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ထိုအထဲ မှ ၅၀၀၀ ကျော်သာ ရောင်းနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
“ အိမ်ရှိရင်ရောင်းနိုင်တာပေါ့နော် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အစိုးရငွေနဲ့ တည်ဆောက်နေတဲ့အပိုင်းကို ကိုလည်းဆောက်သလို ပြင်ပ တွေကနေ တည်ဆောက်နိုင်ကြမလား တည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီငွေတွေ ချေးပေးပါမယ်ဆိုပြီးအဲဒီဘက်ကို ဆက်လက်သွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။”လို့ သူကရှင်းပြပါတယ်။
CHID ဘဏ်တွင် စုဆောင်းသည့်ငွေများကို အတိုးနူန်းအနေဖြင့် ၈ဒသမ၂၅ မှ ၁၀ အထိပေးရသည့်အတွက် အဆိုပါငွေများကို ပြန်လည်ချေးပါက ယခုနူန်းထားဖြင့် ချေး၍မရပဲ အတိုးနူန်း ၃ ရာခိုင်နူန်းသာ တိုးပြီးကာ ချေးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Jica Loan မှ အတိုးနူန်း ၅ဒသမ၅ ရရှိသည့်ချေးငွေများကို ပြည်သူလူထုကိုတော့ ၈ဒသမ၅ နဲ့ ပြန်ချေးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကဆောက်တဲ့ Jica အသိမှတ်ပြုထားသည့် အိမ်များကို ဝယ်ယူမည်ဆိုပါကအဆိုပါနူန်းဖြင့် ထုတ်ချေးမှာဖြစ်ပြီး အပြင်မှ ဆောက်သည့် သူများ ဆိုရင်ဖြင့် ၁၃ ရာခိုင်နူန်းယူမည်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Previous articleStartup to Shake Up Myanmar’s Garbage Industry
Next articleJan Van Eyck’s Diamond-Hard Brilliance